Meizu Pro 6 bụ ọkwa gọọmentị ugbu a, ọ bụkwa ezigbo anụ ọhịa nwere ụdị ọmarịcha mma | Akụkọ akụrụngwa
Meizu Pro 6 bụ onye ọchịchị, ma ọ bụ ezigbo anụ ọhịa nwere ezigbo mma
Mgbe m nwee ike ịgụ ma nụ ọnụ ọgụgụ asịrị dị ọhụrụ Meizu Pro 6 ọ bụ ọrụ ugbu a. Ndị na-emepụta China wepụtara ya n'ụtụtụ a na ihe omume mere na Beijing, dị anya site na elekwasị anya na nnukwu ngosi nke Mobile World Congress, ọ bụ ezie na ọ nwere oke mkpọtụ iji kpọtee onye ọ bụla nwere anụ ọhịa a nke ha kere, ee, ọ na-ewetara nlezianya mara mma nke ọma.
Akụkọ banyere ọkọlọtọ Meizu ọhụrụ dị ọtụtụ na nke kachasị adọrọ mmasịYabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ha niile, nọgidenụ na-agụ, n'ihi na n'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile anyị maara banyere Meizu Pro 6 ọhụrụ.
Tupu ịmara n'ụzọ miri emi ọkọlọtọ ọhụrụ a ga-adị na ahịa n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enyocha atụmatụ ya na nkọwapụta ya.
1 Meizu Pro 6 Atụmatụ na nkọwa
3 Ihuenyo, otu nzọụkwụ n'ihu Meizu
6 Ọnụahịa na nnweta
Meizu Pro 6 Atụmatụ na nkọwa
Naanị 7,25 millimeters
5,2-anụ ọhịa Super AMOLED ihuenyo na Full HD mkpebi nke 1.920 x 1.080 pikselụ na a njupụta nke 423 ppi
25-isi MediaTek Helio X2 processor, na-agba ọsọ na 2.5 / XNUMX GHz
Mali-T880MP4 eserese eserese
3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram
32 ma ọ bụ 64 GB nke nchekwa dị n'ime
21 megapixel igwefoto isi
5 megapixel n'ihu igwefoto
2.560 mAh batrị (mCharge 3.0)
Dị na ọla edo, agba ojii na ọlaọcha
Otu n'ime ihe izizi nke pụtara ihe Meizu Pro 6 a bụ atụmatụ ya, nke m na-agaghị eche n'echiche na onye ọ bụla ga-atụ uche ya.e yiri ya ka ọ dị ka ekwentị mkpanaka ọzọ n’ahịa. Ọbụlagodi ndị nrụpụta China niile jisiri ike bipụta stampụ nke ya ma rụpụta kọmpat na ezigbo ụlọ.
Ọzọkwa, atụmatụ nke ama a bụ ọla zuru oke ma nwee nnukwu akụkụ, ebe ọkpụrụkpụ ya pụtara karịa ihe niile, nke bụ naanị 7,25 millimeters. Ya arọ bụ 160 grams na ọ ga-kụrụ ahịa dị ka Meizu ekwuputala na atọ dị iche iche na agba; nwa, ọla edo na ọla ọcha.
Ihuenyo, otu nzọụkwụ n'ihu Meizu
Dịka ị hụgoro na njirimara na nkọwa nke Meizu Pro 6 a, ọ na-arị elu a 5.2-anụ ọhịa Super AMOLED ihuenyo 5,2-anụ ọhịa na mkpebi HD zuru oke nke pikselụ 1.920 x 1.080 na njupụta nke 423 ppi, nke jikọtara teknụzụ 2.5D dị ka nnukwu ọhụụ. Nke a pụtara na ọ dị ntakịrị curved na nsọtụ. Kpọmkwem, akụkụ ndị ahụ nke ihuenyo ahụ bụ naanị 0.715 millimeters.
Ìhè nke ihuenyo ahụ, nke nwere ike ịdị ala dị ka nits 3, bụ ihe ọzọ dị ukwuu nke atụmatụ ihuenyo ahụ, na ekele maka nke a, anyị nwere ike iji ama na ebe nke ọchịchịrị zuru oke na-enweghị nhụjuanya na ike ọgwụgwụ na anya anyị na enweghị nsogbu. ihe atụ nye onye anyị na ya bi nke dina anyị.
N'ikpeazụ anyị enweghị ike ịkọwapụta ya 3D Press teknụzụ, nke na-eicsomi Apple's 3D Touch na nke ahụ na-enye ohere ịmata ọkwa dị iche iche nke nrụgide maka ekele ha na-arụ ọrụ dị iche iche ma mee ka ụfọdụ nhọrọ na-atọ ụtọ. A ga-anwale teknụzụ ọhụrụ a nke Meizu jikọtara, mana ugbu a ọ dị ka ọ na-atọ ụtọ na ndị nrụpụta ndị ọzọ, na mgbakwunye na ndị si Cupertino, ahọrọla ụdị teknụzụ a.
N'ime Meizu Pro 6 ọhụrụ a, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe na-akwado ike na arụmọrụ na ọkwa nke ngwaọrụ kacha mma na ahịa. Banyere processor, tinye ya a Helio X25, na-enweghị ihe ọ bụla na ihe na-erughị 10 cores nke ahụ nwere ike iru ọsọ ruru 2.5 Ghz. Na-akwado site na 4 GB Ram ebe nchekwa, o doro anya na anyị na-eche ihu ezigbo anụ ọhịa.
Dị ka ọ dị na Meizu, chee na ụdị nke Pro 6 a na 3 GB nke ebe nchekwa RAM ga-erukwa n'ahịa ahụ, maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọghị nnukwu ike na njedebe ha.
Ka esịtidem nchekwa, nke a ga-abụ dị na mbụ na Chinese emeputa nke 32 ma ọ bụ 64 GB, ikike abụọ buru ibu ka onye ọrụ ọ bụla wee chefuo ebe nchekwa.
Ọzọkwa, nnukwu protagonist nke Meizu Pro 6 igwefoto bụ Sony, nke na-eme ya Ihe mmetụta 230 megapixel IMX21 ma nke ahụ na-egosi oke ogo onyonyo. Ọ na-etinye Flash nke 10 LEDs ekesa n'ụzọ okirikiri gburugburu igwefoto na nke ahụ ga-enye anyị ohere ịse foto n'oge ọ bụla na oge nke ụbọchị, ọbụlagodi n'ọchịchịrị zuru oke.
Ihe ọzọ na anyị ekwesịghị ileghara ọhụụ ọhụrụ nke ndị na-emepụta China bụ na igwefoto ya dị ike ga-enwe autofocus laser, ihe dị na ọtụtụ ngwaọrụ ndị dị elu na ahịa na nke enweghị ike ịla n'iyi. Na Meizu ọhụrụ a. ama.
Na ihe omume mere n'izu a, ndị na-ahụ maka Meizu ekwenyeghi n'ụzọ gọọmentị mgbe Meizu Pro 6 a ga-adị n'ahịa, n'agbanyeghị na a ga-eche na ọ gaghị ewe karịa ụbọchị ole na ole ma ọ bụ a izu a ga-ewepụta ya na eze na ahịa ndị China. O kwere omume na ịhụ ya na Spen na mba ndị ọzọ na-eche oge dịtụ ogologo, ọ bụ ezie na ọ dịghị oke mkpa.
Banyere ọnụahịa, ọnụahịa ikpeazụ nke ọnụ, nke a ga-abụ 2.499 yuan maka 32 GB version, nke bụ ihe dị ka 340 euro na mgbanwe na 2.799 yuan maka ụdị 64 GB, nke na mgbanwe ahụ ga-abụ ihe dịka 380 euro. Anyị na-eche na ụdị abụọ ahụ ga-enwe RAM nke 4 GB, yabụ anyị kwesịrị ịmara, n'ihe banyere ịbụ eziokwu, ọnụahịa nke ụdị a na 3 GB nke RAM, nke ga-adị obere karịa nke ekwuputara taa maka elu mbipute.
Kedu ihe ị chere maka Meizu Pro 6 ọhụrụ a nke anyị maara nke ọma taa?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ ọ bụla ebe anyị nọ na ebe anyị nwere mkparịta ụka ma soro gị rụọ ụka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Meizu Pro 6 bụ onye ọchịchị, ma ọ bụ ezigbo anụ ọhịa nwere ezigbo mma
O yiri m ka ọ bụ n'ụzọ? Batrị ahụ adịghị mma na afọ ole na ole ọ ga - agbanye, n'ihe gbasara imepụta na arụmọrụ. Ugbu a Htc, xiaomi na n'ọnọdụ ahụ Meizu na-enye ya otu puku ntụgharị na naanị na ihuenyo.
Abụ m onye ọrụ nke? na oge ọ bụla m na-eche ihe scammed na-akwụ € 840 maka a abụọ-n'aka mobile.
Meizu ga-abụ onye asọmpi na Huawei, ọnụahịa ahụ ga-etinye ya na elu, o nwere ọnụahịa asọmpi, na ogologo oge ụdị ndị China a ga-aka ndị ọzọ si mba ahụ. HTC ka tọhapụrụ ọkọlọtọ ya na nnukwu ọnụ ahịa, Lenovo bụ nnukwu teknụzụ mana ọ megharịbeghị ụdị ekwentị, Xioami anaghị ere ahịa na mpụga China, mmechi, Huawei, Meizu na ikekwe ZTE ga-asọmpi ike n'afọ ndị na-abịanụ.
Zaghachi Carlos Merino
6 ozi ọma na anyị ga-ahụ na mbata nke iOS 10